के महले तपाईंलाई मोटो बनाउँछ? - नेपाली खोज
के महले तपाईंलाई मोटो बनाउँछ?
चिनी अधिकतर फ्रुक्टोज र ग्लूकोजबाट बनेको हुन्छ। मह पनि प्राय: फ्रुक्टोज र ग्लुकोजले बनेको हुन्छ । सोच्नुहोस् कि तपाईं केवल दाँचीदार चिनीको मीठो स्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अतिरिक्त क्यालोरी बिना जसले तपाईंलाई अवांछित तौल बढाउन मूर्ख बनाउँछ। मह वास्तवमा एक मीठो को रूप मा एक उत्तम विकल्प हो, यसमा केहि लाभदायक पोषक तत्व संग चिनी मिसाइएको छ।
मौरी माहुरीले प्रयोग गर्ने प्राकृतिक खाना हो, जबकि प्राय: चिनी अत्यधिक केन्द्रित फ्याक्ट्रीमा निर्मित उत्पादन हो। त्यो उच्च एकाग्रताले हामीलाई यो अधिक गर्न र धेरै चिनी खानको लागि सजिलो बनाउँदछ। महलाई नखान्न सजिलो छ किनकि यो महँगो छ, यसले थोरै मात्रामा परेको छ, र प्राय: यसको स्वाद नै हुन्छ जुन यसको बनिएको बोटहरूको लागि हो।
अर्को शब्दमा, महबाट मोटो पाउन सम्भव छ र चिनीको तुलनामा यसको क्यालोरीमा थोरै फरक छ। तर आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कारकहरूले चिनीको तुलनामा महको साथ बढि बढि गाह्रो बनाउँदछ। मह स्वस्थ छ, तर यदि तपाईं आफ्नो आहार सुधार गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, सायद धेरै बोसो खाने कोसिस गर्नुहोस्।